▷ Runes zothando: Intsingiselo, Qengqeleka uye kwiOracle SIMAHLA
Enkosi kwi Runes zothando sinokuba nolunye uluvo malunga neengxaki ezivela kwindiza yethu enomdla. Ngamanye amaxesha kufuneka sazi amanqaku ngakumbi kwaye singahlali sizivalele kwezethu izimvo, yiyo loo nto eyethu I-rune roll yothando iyakukunceda.
1 Rune roll ngothando
2 Umfuziselo wothando kwiiRunes
3 Yintoni intsingiselo yeembaleka zothando?
4 Isiko kunye nemidlalo yothando
Rune roll ngothando
Olu hlobo lokujikeleza kwi uthando tarot yaqala ukusetyenziswa ngaphezulu kweminyaka engama-2000 eyadlulayo, ngokwesiko yayisetyenziswa kwindawo ye-Nordic yase-Yurophu ukuba yenziwe ziimpawu ezingama-24 (ezingadideki IiCeltic Runes okanye iiViking) apho kumaxesha amandulo zazisetyenziswa njengoonobumba ukuze kamva zikhule zibe kwinto esiyaziyo namhlanje njenge iimoto zothando zasimahla.
Las Imiqulu yeOracle Iinqwelo zothando Iya kusinceda ukuba sinxibelelane neSELF yethu yangaphakathi ngendlela elula neyinyani. Ukwazi ikamva ngothando lwee-runes ayisiyiyo kuphela injongo, isetyenziselwa ubukhulu becala ukukhankanya eyona mibuzo icacileyo kwaye inike iimpendulo kunye nokucacisa oko kusichaphazelayo ukuze amandla ethu asincede sicacise kwaye ukucacisa imiqobo emi endleleni yethu.
Umfuziselo wothando kwiiRunes
Ngamnye uphawu lwee-runes Ziyakusinceda kwaye zisincede kwezinye iinkalo zobomi bethu, ikakhulu ngokusinika ukhuseleko. Abanye Norse Abefundisi kunye nabathakathi Ndiyisebenzisile ukwenza ukuthakatha kunye neetalism, kodwa namhlanje isetyenziswa njenge thanda ikhubalo.
Lo Rune uthando Yenziwe ngu iinyanga ezimbini ezinesiqingatha (isangqa) ukuya lufanekise uthando kunye nabathandi. Ukudibanisa i-axis kwindawo engezantsi emele intliziyo enye yabantu ababini (umanyano).
Indawo esezantsi yophawu lothando nayo inokuchazwa njengaleyo inokwenziwa sisibini ngasinye (umntu ngamnye) yiya ngendlela yakho xa ufuna kwaye uyifuna. Inkululeko yothando.
Yintoni intsingiselo yeembaleka zothando?
Ngokukodwa olu hlobo lwee-runes ngu izithandani, Kodwa ukuba ufuna ukuyisebenzisa kuba uneqabane kwaye unethamsanqa kuyo, qala ucebise ukuba ngaphambi kokuba ufune ukuba nale rune, kufuneka uqale funda kwaye unamkele njengoko unjalo, inyathelo lokuqala lokuba le nto I-rune yothando kukuthanda ewe okanye ewe.
Ibalulekile yazini ukuba amandla erune othando es bulumko Ubukhulu becala, yiyo loo nto ke ukuba sifuna ukumela obu bugcisa, kuya kufuneka sibenobudlelwane obusempilweni kunye ukuvumelana phakathi kwala maqela mabini. Ukulingana kubudlelwane bezothando kubalulekile.
Iimbaleki zothando zikwasenza sibone ukuba akufuneki silibale ukuba ngumntu nokuba sinalo iqabane lethu. Eli candelo liyakusinceda ukuba sizithembe ngakumbi ngaphandle kokulibala omnye umntu fumana umanyano umntu ohamba naye. Ngale ndlela uthando esiziva ngathi sinokubonisa ubukhulu becala kuthando lwethu.
Enkosi kwiiRunes zoLuthando uya kuyitshabalalisa imida kunye neendonga ukuze isebenze njengokukhusela kulwalamano lwakho.
Kufuneka siphathe eli khubalo kuthi, nokuba liyisongo, isacholo somqala okanye iringi.
Isiko kunye nemidlalo yothando
Enye ye ezona zisetyenziswayo Sebenzisa le Rune yothando kwikhandlela kwaye ulayite, kodwa hayi ngaphezulu kwemizuzu engama-20. Ngeli xesha kuyakufuneka sivale amehlo ethu kwaye silubone ngamehlo uthando lwethu ngaphakathi kuthi de kube siziva ngathi sinalo ngaphakathi.
Ngale ndlela, iyakusikhokela kwindlela engaqondakaliyo yokuzifumana kwaye sikwazi ukuthanda iqabane lethu nge-100% ngaphandle koloyiko.